चौबीस_वर्ष_एउटै_कोठामा_बन्धक_यौ’न_शो’षणसहित_चरम_यातना:: Mero Desh
Published on: २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:१८
मंगलबार अपरान्ह साढे पाँच बजेतिर नेपालगन्जमा रहेको कालपृष्ठ दैनिकको का’र्यालयमा एकजना ख्याउटे शरीर भएका मानिस रुन्चे अनुहारसहित आइपुगे! उनले काँधमा एक कालो झोला बोकेका थिए शरीर फतक्क गलेकोजस्तो देखिन्थ्यो परिचय सोध्दा उनले आफ्नो नामसमेत अनकना एर भन्न सके आमाबुबाको नाम र ठेगाना उनले बिर्सि सके का छन् ।
सुन्दा कुनै कहालीलाग्दो चलचित्रको कथाजस्तो जीवन आफूले भोगेको ती व्यक्ति बताउँछन् उनका खुट्टामा चुरोट ले डामेका दागहरु छन् पेटमा तलदेखि छातिसम्म चिरिए को दाग देख्न सकिन्छ । करिब ९ वर्षको उमेरमा खोटाङ बाट आमाबुवासहित काठमाडौंको सानेपा पुगेका विज्ञान एकदिन केही सामान किन्न गल्लीमा निस्केका बेला उनको अघि एक कालो गाडी आएर रोकियो ।
उक्त गाडीबाट तीनजना मानिसहरु निस्किए अचानक उनी माथि कम्बलले ढाकियो र गाडीभित्र कोचियो ।गाडीमा उन का आँखा र मुखमा पट्टि बाँधियो आँखा खुल्दा उनी आलि सान महलजस्तो लाग्ने कुनै घरमा पुगेका थिए ।त्यहाँ पुगि सकेपछि म चिच्याएँ । कराएँ । यसरी किन ल्याएको भनेँ? आमाबुवाकहाँ पुर्‍याइदिनुस् भनेँ । कसैले मेरो आवाज सुनेन,’यसो भनिरहँदा विज्ञानका ओठ कामिरहेका थिए ।
आँखामा नआँशु भने देखिएन । सायद आँशु सुकिसकेका छन् । घरमा पुग्दा उनले दुईजना महिला र एकजना पुरुष देखेको बताउँछन् ।उनीहरु मसँग कुरा गर्दा नेपालीमै बोल्थे । तर आफू-आफू बोल्दा भने अर्कै भाषामा बोल्थे,’ उनले भने ।एक भर्खरको बालक उनले त्यतिबेला आफूमाथि के भइरहेको छ ?भन्ने समेत ठम्याउन सकेनन् उक्त आलि सा न महलको एक कोठामा आफूलाई बन्धक बनाएर राखिए को विज्ञान बताउँछन् ।
मलाई २४ वर्षसम्म एक कोठामा बन्धक बनाएर राखियो । अनि यौन शोषण गरियो । यौन सम्पर्क गर्न नमाने बिलेडले चिर्थे र त्यसमाथि चुरोटले डाम्थे…,’विज्ञान थप बोल्न सके नन् । उनका खुट्टामा ठाउँ-ठाउँमा काला दागहरु देखिन्छन् । विज्ञानका अनुसार उनलाई अ’पहरण गर्ने महिलासहित अरु महिलाहरु पनि उक्त घरमा पुग्थे ।उनको यौ’न शो’षण गर्थे ।विज्ञानले भने, कालो छाला भएका, घुम्रे कपाल भए का महिलाहरु पनि कहिलेकाहीँ आउँथे । सबैले मैमाथी हमला गर्थे ।’
उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिन अनेक इन्तजाम गरि एको थियो । बाहिर केही पनि नदेखिने कोठामा राखिएको थियो । घर कतितले थियो ? भन्नेसमेत उनलाई याद छैन । घरमा १५-२० वटा कोठा हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।बाहिर तीन चारवटा च्यानल गेट राखिएको थियो । अ’पह र’ण गर्ने पुरुष कहिलेकाहीँ आउँथ्यो । दुईजना महिलाहरु पालो मिलाएर घरबाहिर निस्कन्थे ।
त्यसैमाथी प्रायः उनलाई बेहोस हुने सुई लगाएर राखिन्थ्यो । भक्कानिँदै विज्ञानले भने, २४ वर्षसम्म मैले घाम कस्तो हुन्छ ?आकाश कस्तो हुन्छ? तारा कस्तो हुन्छ ?जून कस्तो हुन्छ ? बाहिरका मान्छे कस्ता हुन्छन् ? थाहा पाइँन ! एक दिन घरमा एकजना महिलामात्रै भएको मौकामा उनले भाग्ने उदेश्यले महिलासँग भिड्न खोजे । महिलाले उनको घुँडामूनि चक्कुले घोपिदिइन् ।घुँडामुनि उक्त घाउ’को दाग अझै रहेको छ । त्यसपछि उनको भाग्ने हिम्मत र संजोग दुवै मिलेन ।
उनलाई सानो हुँदा कहिलेकाहीँ चिया र खाना बनाउन लगा उँथे । ठूलो भैसकेपछि उनको लगातार यौ’न शो’षण मात्रै भइरह्यो । २४ वर्षमा उनले यति यातना पाए कि अहिले कोही महिला देख्यो कि डर लाग्ने गरेको बताउँछन् । कोही मान्छेको पनि विश्वास लाग्न छोडिसक्यो,’उनले भने। विगत २४ वर्षमा उनकोसर्वस्व लुटियो यतिसम्म कि उनले आफ्नै आमाबुवाको नामसमेत याद राख्न सकेनन् साथीसँगी कसै को नाम उनलाई याद छैन । धेरै बेर सम्झिने कोसिस गरेर उनले भने, त्यतिबेला एउटी बहिनी थिई । उसको नाम तुल सी हो की यस्तै थियो ।’
उनीसँग हाल बचेको चिज भनेको मात्र उनको नाम मात्र हो कहिलेकाहीँ त यही नाम पनि बिर्सिंन्छु कि भन्ने डर लागिर हन्छ । कहिलेकाहीँ आफैलाई चिन्दिनं कि भन्ने डर लाग्छ,’ लामो सुस्केरा तान्दै उनले भने । २४ वर्षसम्म विज्ञानको शो’षण भयो ।करिब चार वर्षअघि उनको पेटसमेत चिरियो । किन चिरियो ? उनी भन्न सक्दैनन् आजभोली अलिकति खाना बढी भयो, पानी बढी भयो भने घाँटीमा सिन्काहान्छ पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
चिया पिउन भने तलतल लागिरहन्छ,’ विज्ञान भन्छन् । पेट चिरिएको घाउ निको हुन एक वर्ष लागेको उनी बताउँछन् । डाक्टरहरु पनि घरमै आउँथे । अर्कै भाषा बोल्थे सब चिज घरभित्रै हुन्थ्यो,उनले हातमा बनाइएको ट्याटु देखाउँदै भने यो पनि उनीहरुले आफै बनाइदिएका हुन् मैले उनीहरुलाई मेरो नाम कहिल्यै भनिनं । त्यसकारण ट्याटुमा नाम दीपक लेखिदिए ।’
करिब ६ दिनअघि राति सुतेको समयमा एकाएक उठाएर विज्ञानलाई गाडीमा हालियो !राति साढे दुईबजेतिर हुनुपर्छ । म त्यतिबेला बेहोस् थिएं कि जस्तो लाग्छ,’विज्ञानले भने, गाडीमा हालेर करिब दुई घण्टा जति कुदाइयो । अनि एक घना जंगलको बिचमा छाडेर उनीहरु हिंडे,’ उनले भने । विज्ञानका अनुसार उनी कमजोर हुँदै गएको,उमेर ढल्किन लागेको, पेट चिरेको र निरन्तर बिरामी परिरहने भएका कारण उनीहरुले अन्तमा जंगलमा छाडेर गएकाहुनसक्छन् ।
पहिले मोटोघाटो र हृष्टपुष्ट थिएँ पेट चिरिसकेपछि निरन्तर दुब्लाउँदै र कमजोर हुँदै गएँ,’उनले भने त्यो जंगल काठमा डौंको बल्खु आसपासको रहेको विज्ञान बताउँछन् । उन लाई जंगल काट्नै पाँच घण्टा लाग्यो । अग्लो पहाड काटेर म एक मान्छे नै मान्छे भएको चोकमा आइपुगें ।त्यहाँ यो कुन ठाउँ भनेर सोध्दा एकजनाले बल्खु हो भनेका थिए,’ उनले भने । न जाने गन्तव्य न होस्को ठेगान ।
गलेको शरीर, मतिष्कमा अनेक त्रास, आशंका र अविश्वास बोकेर शहरमा दुई घण्टा कता हो कता हिडे । त्यसपछि एउटा ट्रकको पछाडि झुण्डिएर उनी तराईं झरे । ट्रकबाट झर्दा अँध्यारो भइसकेको थियो। कुन ठाउँ हो थाहा भएन । सडकमा रुँदै हिडिरहेको थिएँ । एकजना दाई आएर सोध्नु भयो । सबैकुरा बताएँ । उहाँले मिडियामा जाउ भनेर भन्नु भयो ! त्यो दिन पहिलोपटक मिडिया शब्द सुनेको थिएँ उन ले भने, कहाँ हो ? के हो?मिडिया थाहा थिएन ।
उहाँले पाँच सय रुपैयाँ भारु दिनुभयो। त्यसैले खाना खाँदै दुईदिन हिँडेर यहाँ आइपुगें,’ विज्ञानले भने । नेपालगन्जमा पनि उनी करिब तीन दिन यताउता भौतारिए । नेपालगन्ज किन आउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, मलाई थाहै छैन म कहाँ आइपुगेको छु । जता गाडी र खुट्टाले डोर्‍यायो त्यतै हिँड्दै आएँ,’ उनले भने, यहाँ आइपुगेपछि आमा बुवाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर पुरुषका अनुहार हेर्दै हिंडे आमाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर महिलाको अनुहार हेर्दै हिंडे । तर भेटिनं,’ उनले भने ।
अहिले त महिलाहरुलाई देख्यो भने आमा भेट्ने आशा भन्दा तीनै बन्धक बनाएर शो’षण गर्ने महिलाको अनुहार आँखाअघि आउने गरेको विज्ञान बताउँछन् मान्छेको वि’श्वा स लाग्न छाडिसकेको उनी बताउँछन् एकदुई ठाउँमा पुलि सलाई आफ्नो पीडा सुनाएर सहयोग माग्न खोजें तर, हामी के गर्न सक्छौँ र ? भने’ उनले भावुक हुँदै अनुभव सुनाए ।
मंगलबार नेपालगन्जको सेतु विक चोकमा पुगेका उनले मिडिया कहाँ छ? भनेर एक प्रहरीलाई सोधे चोकमा खटे का प्रहरीले कालपृष्ठको कार्यालय देखाईदिए । कालपृष्ठले उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई सुम्पिएको छ ।स्रोत मिडिया सेन्टर / कालपृष्ठ राष्ट्रिय दैनिक